USolwazi Andrew Green.
Umcwaningi Uklonyeliswe Ngendondo Enkulu yaseMelika
USolwazi Andrew Green wase-School of Agricultural, Earth and Environmental Sciences (e-SAEES) uzoklonyeliswa nge-American Geophysical Union (i-AGU) ehlonipha igalelo lakhe ocwaningweni lwezesayensi yamanzi odlwandle.
U-Green uzoklonyeliwa emcimbini ozoba seMelika ngoZibandlela nge-Africa Award for Research Excellence in Ocean Sciences.
U-Green uzoba ngomunye wabakhethekile i-distinguished group yososayensi, abaholi, abafundisayo, izintatheli nabaxhumanisi abangaphezu kwama-30 abazoklonyeliswa yi-AGU, engenye yezinhlangano ezinkulu nezihlonishwayo emhlabeni kwezesayensi yezomhlaba. Kwabanye abazoklonyeliswa kukhona nomshayisiginci webhendi ye-rock i-Queen uDkt Brian May.
Ngalo nyaka wekhulu yasungulwa i-AGU, i-Union iklomelisa abantu ‘ngamagalelo, iqhaza nomsebenzi wabo ovelele eMhlabeni nasemphakathini’. Le miklomelo itholwa yilabo abakhombise ubunyoninco kwezesayensi, ezocwaningo, ezemfundo, ezokuxhumana nezokunikela emphakathini.
I-AGU ithe abanqobile bahambisana nomsebenzi wayo endimeni yezesayensi ukuhlomulisa abantu. Baklonyeliselwa ‘iqhaza labo elimqoka ekusabalaliseni izwi lomphakathi waseMhlabeni nasemkhathini ngokukhuthaza abanye ososayensi ukuphucula impilo emhlabeni’.
Umklomelo waminyaka yonke ozotholwa wu-Green wasungulwa ngowezi-2015 ukuhlonipha ososayensi base-Africa nokuvula amathuba okusebenzisana nokwesekana ezingeni lomhlaba.
IPhini Vice-Chancellor laseKolishi lezoLimo, ezobuNjiniyela nezeSayensi uSolwazi u-Albert Modi limhalalisele u-Green.
‘Uyaphokophela ekukhuphuleni izinga e-UKZN kanti siyamhalalisela uSolwazi Andrew Green,’ kusho uSolwazi Modi.
U-Green, okade waba se-UKZN, lapho afunda khona, ucwaningo lwakhe lugxile ezinhlakeni zezindlela zogu nezasolwandle nokusebenza kwazo kuye ekugcineni amarekhodi eziphepho. Kumanje usembhidlangweni wokucwaninga umphumela wesiphepho i-Cyclone Idai ogwini lwaseMozambique, ngale kweminye imisebenzi ayenza eNamibia, e-Brazil, eYurophu naseMelika.
U-Green unentshisekelo ngezolwandle nangobudlelwano ezingeni lomhlaba. Wake waba ngomunye kwi-Fulbright Visiting Research Scholar Program ngowezi-2018, okwathi ngemva kwalokhu wathi uzizwa eneqholo ngezinga lokucwaninga nokuqeqesha eNingizimu Afrika ngisho izinsizakusebenza zizincane.
U-Green ukhuthele njengoba engomunye wabeluleki ebhodini le-International Union for Quaternary Research nenxusa lase- Atlantic/Indian Ocean lomkhankaso we-Nippon Foundation/GEBCO Seabed2030. Uwumhleli omkhulu webhuku lamaphepha ocwaningo lomhlaba iMarine Letters nomunye wabahleli bebhuku lamaphepha ocwaningo i-Marine and Petroleum Geology. Uchitha isizungu ngokugibela amagagasi ogwini lwaseKZN.
UKZN Academic Youngest Ever Member of Economic Society of SA Council
Uhlabene Oweziqu Zobudokotela Kwezokudla Okunomsoco
Kuvulwe Ukuxhumana Kwabanokukhubazeka ESikoleni sezeMfundo
UKZN Involved in Creation of New Lung Cancer Unit in Durban
Kukhonjiswe Iqophamlando Elixoxa Ngempilo Yezitshudeni Emanyuvesi Akuleli
Education Student hosts “Call me a Woman” Peace March
College of Humanities Hosts Doctoral Research Proposal Seminars
Host of Registrars Present Research at Symposium
UKZN at Church History Society of Southern Africa Conference
School of Management, IT and Governance Celebrate Women’s Month in Grand Style!
Celebrating Heritage Month in Music at UKZN